Hiran State - News: Madaxweynaha Somaliya oo gudoomiyaha baarlamaanka u soo bandhigay qorshe cusub iyo gudoomiyaha oo diidmo ka keenay.
Madaxweynaha Somaliya oo gudoomiyaha baarlamaanka u soo bandhigay qorshe cusub iyo gudoomiyaha oo diidmo ka keenay.
Kampala:- Madaxweynaha Somaliya iyo R/wasaare Farmaajo oo ujeedadoodu aheyd in ay hal mar afhayeenka baarlamaanka afkiisa ka helaan inuu ogolaado in dowlada 1 sano loogu daro ayaa hada madaxweynaha Somaliya soo bandhigay qorshe cusub oo la doonayo in leyskaka weeciyo cadaadiska aduunka ka heysta xukumada Farmaajo iyo madaxweyanaha Somaliya oo la heshiin waayey amaba kasban waayey baarlamaankii isaga soo doortay amaba sharciga ka dhigay Farmaajo.
Wararkii ugu danbeyey ee maanta naga soo gaaraya madasha shirka ayaa sheegaya in wasiiradii qurbo joogta ahaa ee madaxweynaha la socday ay yahiin kuwa fidnada ka dhex wada labada masuul kedibna shirkii maanta ay wada kulmeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka oo kaliya, kedibna madaxweynaha ayaa soo bandhigay dhawr qodob oo uu xal u mooday isna lahaa afhayeenka wuu kaa yeelayaa waxaana ka mid ahaa.
1-Madaxweynaha Somaliya ayaa u soo jeediyey afhayeenka in loo ogolaado inuu hal sano sii joogo isaguna uu xilka ka qaadayo Farmaajo wasiiro tayo lehna uusiin doono affhayeenka baarlamaanka iyo xulufadiisa.
Qodobada kale waa wax iska private u ah labada masuul laakinse waxaan ka soo qaadaneynaa jawaabtii afhayeenka baarlamanka waxuuna yiri sidan.
Shariifow wax badan ayaan dan iigooyni ah u cararay laakinse markaan waxaan doonayaa inaan u daneeyo amaba isku dayo inaan ka shaqeeyo danta shacabka marka doorasho u soo diyaar garoow hadaad ku guuleysatana waanu kula shaqeyneynaa hadaan aniga ku guuleystana ila shaqee.
Madaxweynaha Somaliya oo waxoogaa niyad jabsan ayaa shirkii ka baxay. marka laga soo tago shirka Kampala waxanu xiriir la sameynayo mudanayaasha baarlamaanka ee Mogdisho ku sugan waxeyna yiraahdeen, madaxweynaha Somaliya waa nin wanaagsan daacadna ah waliba inta badan mudanayaasha baarlamaanka wey raacsan yahiin taageero badana wuu ka heystaa laakinse waxaa jahwareerinayo wasiiro qurbaha ka tagay oo doonaya in ay isaga iyo baarlamaanka Somaliya iska hor keenaan marka ha soo quusto hana is arkaano kuwa waalayo iyo isaga kedibna xili uusan heleyn codka baarlamaanka amaba uu iska xumeeyey mudanayaasha baarlamaanka ayuu doorasho soo gali doonaa waana intaas waxa ay doonayaan Farmaajo iyo kooxdiisa qurbaha ka timid ayey yiraahdeen.
Dhinaca kale wasiirada qurbo joogta u badan ayaa lagu soo waramayaa waxa ay arimahani u sameynayaan waxey wataan oo doorashada soo socota u soo sharaxan doonaan Farmaajo marka waa in sharafta laga ridaa madaxweynaha loona tusiyaa aduunyada in meesha dhibta ka jirto ay tahay labada Shariif ee aysan aheyn xukumada.
Dadka arimaha Siyaasada Somaliya u guur gala waxey leeyahiin wali madaxweynaha Somaliya shacbiyad ayuu ku leeyahay mudanayaasha baarlamaanka laakinse waxey shaki kaliyeen waxa madaxweynaha isagoo shacbiyad heysta uu u difaacayo xukumadan qurbo joogta u badan oo hadane isku diyaarinaya iney soo sharaxdaan R/wasaarahiisa Farmaajo?
Isku soo duuboo Farmaajo iyo wasiiradan qurbo joogta ah wey guulaysan doonaan hadii hal mar afkiisa laga helo afhayeenka baarlamanka waxaanu ogolaanay in 1 sano loogu daro xukumada Farmaajo, hadii taasi dhacdona waxey wado cusub u fureysaa aduunayda inba dhamaanba dib loo soo dhiso haya'ddaha dowlada sida baarlamaan cusub, madaxweyne iyo afhayeen lana yareeyo tirada baarlamaanka faraha badan. hadii ay doorasho ka dhacdo wadanka ka hor bisha 8aad waxaa janis fiican heysta madaxweynaha Somliya oo saaxibo badan ku heysta baarlamaanka halka ay daaqada ka baxayaan Farmaajo iyo wasiiradan qurbo joogta u badan mana doonayaan in ay hada doorasho dhacdo maadama aysan iyagu diyaar aheyn. xitaa diyaar uma ahan Farmaajo hadii uusan diyaar aheyn inuu u ololeeyo madaxweynaha isaga xilka uu hayo u dhiibay taasina waa dhaqanada daneysiga ku dhisan ee laga dhaxlay wasiiradan iyo R/wasaarahan qurbaha mudada joogay.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegayo in ujeedada ugu weyn ee ay Xukumada Farmaajo u doonayaan 1 sano iney tahay ineysan hada diyaar u aheyn doorsho ay galaan marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha oo ay doonayaan iney waqti fiican u helaan sanadka danbe iyagoo soo diyaar garoobay. sidoo kale ujeedada labaad ayaa ah waxey aduunyada ka dhaadhiciyeen in dhibaatada ugu weyn iyo meesha ay ka socon weysay siyaasada Somaliya ay tahay labada Shariif marka aduunyada ayey u tusinayaan in meesha laga saaro labada Shariif si ay booskooda u buuxiyaan mustaqbalka.
Warar hada naga soo gaaraya madsha shirkane waxey sheegayaan in Farmaajo ay u yeereen wasiiradii qurbaha ka tagay ee ka midka ahaa wafiga madaxweynaha iyagoo u arkey in laga yaabo in madaxweynaha iyo afhayeenku isku soo dhawaadaan taasi oo aan wax dan ah ugu jirin Farmaajo iyo xukumadiisa. Shacabka Somaliyeed ayaa u dhaxeeya loolan ku dhisan dano shaqsi waxaana hada muuqata ineyba meesha ka baxeyso dantii guud.
· admin on June 07 2011 14:06:40 · 0 Comments · 1692 Reads ·
14,605,891 unique visits